Madaxwaynaha JFS oo hambalyo udiray shacabka Munaasibadda bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxwaynaha JFS oo hambalyo udiray shacabka Munaasibadda bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed
Madaxwaynaha JFS oo hambalyo udiray shacabka Munaasibadda bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Ummadda Soomaaliyeed bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay fadliga Bishan barakeysan ee Ramadaan, isagoo shacabka soomaaliyeed kula dardaarmay in ay ka faa’iideystaan fadliga bishan, waxa uuna Alle ka baryey in uu naxariis iyo nimco ku manneysto dalkeenna iyo dadkeenna.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa bilashada Bishaan barakeysan ee Ramadaan, bishaan waa bil kheyr, sidaas awgeed waa inan badinaa towbadda iyo cafiska, madaama ay ku jirto habeenka kheyrka badan ee Leylatul Qadriga”.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ku baraarujiyey in ay is caawiyaan oo garab istaaggaan walaalahooda danyarta ah, madaama cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameyn taban ku yeeshay bulshadeenna oo duruufo adag la halgamayey.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ku dhiirrigeliyey dadka Soomaaliyeed in ay is-cafiyaan oo ay kaalmeeyaan waalalahooda dan-yarta ah, Sidoo kale ka shaqeynta danta guud oo amnigu ugu horreeyo, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinteenna suuban ee Islaamka.
Bismillaaahi Al-raxmaani Alraxiim,
1442/9/1 H 2021/4/13 M
Bilashada bishan barakeysan ee Ramadaan waxa ay xambaarsan tahay khayr badan. Waa bishii kheyrka, waa bishii towbada, cafiska, waa bisha uu ku jiray habeenka kheyrka badan ee Leylatul Qadriga. Waa bisha sheydaanka la xiro oo Alle uu naarta ka xoreeyo muslimiin badan oo uu waafajiyey khayrka bishan.
Madaxwaynaha JFS oo hambalyo udiray shacabka Munaasibadda bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed was last modified: April 13th, 2021 by Admin
Wararkii Ugu Dambeeyay kalsooni kala noqoshada Xukuumada Ra’isul Wasaare Kheyre
MD Xassan Sheikh: Qadiyadda badda waxay weli taagantahay meeshii aan afar sano ka hor uga tagnay